စစ်​အင်​အား အ​ကောင်းဆုံး ၅နိုင်​ငံ – Blue Sea
World Strategic Institute က ထုတ်ပြန်သော 2018 ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ စစ်အင်အား အကောင်းဆုံး (၅) နိုင်ငံ
1. United State of America (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်အင်အားအကြီးမားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စစ်သည်အင်အား ၁.၃ သန်းကျော်ရှိပြီး အရန်အင်အား ၉ သိန်းရှိသည်။ ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အဖြစ် နိုင်ငံ GDP ၏ ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၆၀၁ ဘီလီယံ သုံးစွဲထားသည်။ တိုက်ခိုက်ရေး သံချပ်ကာတင့်ကား ၅၀၀၀ ကျော်သာရှိသော်လည်း ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးနှင့် စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး လေတပ်နှင့်ရေတပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ နျူကလီးယား လက်နက်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လေဆာလက်နက်ကိုလည်း စတင်အသုံးပြုရန်​ ကြိုးပမ်းနေပြီ ဖြစ်သည်။
2. Russia Federations (ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ)
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သည်ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အဖြစ် နိုင်ငံ GDP ၏ ၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၈၄.၅ ဘီလီယံသုံးစွဲထားသည်။စစ်သည်အင်အား ၇ သိန်းနှင့်အရန်အင်အား ၂ သိန်းရှိသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးတင့်ကားတပ်ဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံး လေတပ်နှင့်ရေတပ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးနိုင်ငံလဲဖြစ်သည်။
3.People’s Republic of China (တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ)
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် စစ်သည်အင်အား ၂.၂ သန်းနှင့် အရန်အင်အား ၁.၄ သန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ရေငုပ်သဘောင်္ပိုင်ဆိုင်မှု ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အဖြစ် နိုင်ငံ GDP ၏ ၁.၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၂၁၆ ဘီလီယံသုံးစွဲထားသည်။ နျူကလီးယား လက်နက်လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
4. India Republic (အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ)
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတွင် စစ်သည်အင်အား ၁.၄ သန်းနှင့် အရန်အင်အား ၈.၂ သန်းရှိသည်။ ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အဖြစ်နိုင်ငံ GDP ၏ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၅၀ ဘီလီယံသုံးစွဲထားသည်။ တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ်သည်။ နျူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။
5. France Repubic (ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ)
ပြင်သစ် သမ္မတနိုင်ငံသည် စစ်သည်အင်အား ၂ သိန်းကျော်နှင့် အရန်အင်အား ၁.၈ သိန်းခန့်သာပိုင်ဆိုင်သည်။ ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အဖြစ်နိုင်ငံ GDP ၏ ၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၆၂.၃ ဘီလီယံသာ သုံးစွဲထားသည်။ လေယာဉ်တင်သဘောင်္ ၁ စီးနှင့် ရဟတ်ယာဉ်တင်သဘောင်္ ၃ စီးထိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယခုအခါ အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်တင်သဘောင်္ ၂ စီးကိုလေယာဉ်တင် သဘောင်္များအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
Ref…Translate from Internet
#NLH_IR (M.M.O Contributor)
လက်က ပြောပြသော မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကြောင်း သိကောင်းစရာ